Herisetra amin’ny fikirakirana internet Ny 84%-n’ny tanora Malagasy no efa lasibatra
Désiré Ranaivoson « Isika rehetra no nanao ireny fotodrafitrasa ireny »
Marina Iadiana indray izao ny hoe iza no nanao ny fotodrafitrasa izatsy sy zaroa, hoy ny mpandrindra nasionalin’ny antoko politika Marina,
Volabe azon'i Madagasikara Misy resaka maro tsy mbola mazava
Efa tsara aloha ilay nampahafantatra ny vola fanampiana azo mba hiatrehana ny covid 19.
Tontolo Iainana Sendaotra ny minisitra Vahinala Raharinirina tany Toamasina
Tamin’ny fitsidihan-dRtoa Vahinala Baomiavotse Raharinirina, Ministry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny orinasa HITA (Huilerie de Tamatave) no nanamarihany fa mbola misy ny ezaka ilaina hanajan'ity orinasa ity lamina takiana satria misy fofona hafahafa mivoaka ivelany,
Hopitalim-panjakana ao Moramanga Nahazo fiara sy fitaovam-pitsaboana avy amin’Ambatovy
Laharampahamehana voalohany ho an’Ambatovy ny fahasalamana sy ny fikojakojana ary ny fitandroana ny aroloza ka taratra ao anatin’ireo hetsika maro samihafa efa notanterahina ho fampandrosoana ireo faritra iasan’ny orinasa izany.
TOLIARA Hahazo asa fivelomana maharitra ny vehivavy
Tokony hiezaka hilofo amin’ny fianarana hatrany ny tovovavy fa tsy maimaika hiditra ao anaty tokantrano,
Mpisehatra amin’ny harena ankibon’ny tany Niara-nientana namboly hazo
Nanatontosa fambolen-kazo tao amin'ny kaominina ambanivohitra Ampitatafika, distrikan'Antanifotsy ireo mpandraharaha eo amin'ny
Fisondrotam-bidim-piainana Efa tena tsy zakan’ny mpanjifa intsony
Nihamafy ny fidanganam-bidim-piainana ny taona 2020 ka tokony hampiharina haingana ny lalàna fiarovana ny mpanjifa, hoy ny filoha mpiaro ny zon’ny mpanjifa, Ralita. Ilaina,
Ny 84%-n’ireo tanora mampiasa internet nanaovan’ny fikambanana ONG Youth First fanadihadiana dia nanambara fa efa niharan’ny herisetra avokoa.
Nanambara ny fikambanana tamin’ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny foibeny Marohoho Tsimbazaza fa tokony hisy ezaka matotra ho fiarovana ny tanora mahakasika izany. Zava-doza ny zatra-mitranga ankehitriny, hoy izy ireo satria efa mahatratra 2 600 000 ny isan’ireo mpikirakira internet eto Madagasikara ka ny 54% amin’ireo dia tanora avokoa. Hisy ny hetsika lehibe mitondra ny lohateny hoe “Safer Internet Day” hotanterahina ny 29 febroary ho avy izao hampahafantarana ireo tanora ny fiarovantena manoloana ny herisetra anaty tambajotra aterineto. Noho izany ihany koa no nanaovan’izy ireo antso amin’ireo tompon’andraikitra mba handray fepetra mahakasika izany satria tena misy ary manjaka ny herisetra mahazo ireo tanora na dia efa misy aza ny lalàna n° 2014-006 sy 2019-031 mahakasika ny cybercriminalité. Ankoatr’izay dia namolavola ny fandaharan’asa SAHY izay maharitra 3 taona ny fikambanana ONG Youth First mba tsy hitera-doza fa ho tombony amin’ny tanora ny fampiasana ny internet. Mikasika ny fihaonana amin’ny 29 febroary dia hisy ny famelabelaran-kevitra, ny fampirantiana ara-tsary sy ny fampahafantarana ireo karazana herisetra tahaka ny cyberharcèlement, ny piratage, ny fanalam-baraka (diffamation), ny fanapariahana vaovao tsy marina (fake-news) sy ny sisa. Mazava ho azy fa hisy ihany koa ny vahaolana hatolotra mifandraika amin’ireo karazana herisetra rehetra misy ireo amin’io fotoana io. Ankoatra ny fikambanana ONG Youth First dia manampy amin’ny fanatanterahana ity hetsika “Safer Internet Day” ity ny Vondrona Iraisam-pirenena miaro ny ankizy sy ny zony (UNICEF) sy ny GIZ.